Complaint / Claim » ညီလေးအလင်းဆက်သို့ ခေတ္တ ခဏမျှ ….. နှုတ်ဆက်ခြင်း	22
View all posts by ရွှေညာသား →	Blog
ခင် ခ says: ကိုရွှေညာသားရေ လူမှာ မျက်လုံးတောင် တောင်တဖက်မြောက်တစ်ဖက် နှစ်လုံးရှိသေးတာဘဲ လောကကြီးအမြင်မတူတာ အဆန်းမှမဟုတ်တာဗျာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: -သို့ ဂျစ်သောအစ်ကိုကြီး ဟိုဘက်ကပို့စ်မှာ ဖတ်လိုက်ရလို့ လန့်ပြီး ဒီဘက်ရောက်လာတာ။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ဒီရွာက ဒီလိုချည်းပဲ။ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ သဘောမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ ဟိုဘက်က ပို့စ်မှာ ဘယ်သူမှန်းမသိကတည်းက ကွန်မင့်ဝင်ပေးလိုက်တာ။ ဒီရွာထဲမှာက အမေစု ထိရင် မလွယ်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် မျှစ်မ တို့ ဒီသဘောမပြောပါဘူးနော်။ စနစ်ကိုပဲ တိုက်ကြတာပါ။ လူကို မတိုက်ပါဘူး။ ဒီဘက်ကလူ မဟုတ်ရင် ဟိုဘက်ကလူဖြစ်လိမ့်မယ့်လို့ ပြောကြတာမျုိးကတော့ လွန်ပါတယ်နော်။ ကြားနေဆိုတာလည်း ရှိတာပဲ။ အစ်ကိုကြီး ပြောတဲ့ကိစ္စ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နယ်မြေက ပညာတတ်တွေ အမေစုကို သိပ်မကြိုက်ကြဘူး ဆိုတာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကလည်း ပညာရှင်ဆိုတော့ ပရောဂျက် မမြင်ရရင် စိတ်တိုတယ်။ မျှစ်မကတော့ ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ အစ်ကိုကြီးဟာ ဟိုဘက်လည်း မဟုတ်၊ ဒီဘက်လည်း မဟုတ်၊ အကုန်လုံးကို စိတ်ချဉ်ပေါက်မိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။
လောက,ကထွက်.. လောက,ကထွက်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီ ခင်ဇော် (15102012) says: အကိုဂျီးးး(cd to A Yee)
alinsett says: အဲ ဘီလိုဘီလိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။
ဦးကြောင်ကြီး says: အမ်မာ.. ထွက်တာတောင် ယိုးဒယားကလေးထွက်လို့… ထွက်မှာဖြင့် မြံမြံထွက်.. ဗယ်သူမှ မဆွဲပါ။ ရွာသဂျီး ဦးမာမွတ် စကားယူသုံးရလျင် ယွှေညာသားမှာ မြန်တျန့်အကျင့် ၁၀၀% ရှိ၏။ သူများကို ပြောမယ် ဆိုမယ်၊ ကိုယ့်ပြန်အပြောခံရလျင် ရိုင်းတယ်၊ မရင့်ကျက်ဖူး ဦးအောင်ပြောမယ် အိညှက်အိညက်လုပ်မင် ငိုချင်းချမယ် အော်ချက်ထုတ်မယ် ကိုယ့်ရေအိုင်လေးထဲမှာ ငါးမန်းဂျီးလုပ်မယ်.. အဲဒလိုလူမျိုး ဘယ်တော့မှ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မတန်.. ။ ဘိန်းစားဂျင်းအတူတူ တမတ်ဖိုး ပိုရှူ မချဉ်စမ်းပါနဲ့.. တရုတ်ကပေးမည့် ပရောဂျက်သာ ရအောင် လျှာပါတော့ဗျာ…။
ရာမည says: ကိုအလင်းဆက်ခင်ဗျာ
alinsett says: ဦးကြောင်ကိုလားးး
ရာမည says: စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာအလင်းဆက်ရယ် ကျွန်တော် ဆွမ်းမလောင်းပါဘူးခင်ဗျာ
အော် ကိုကြောင်ကြီးနဲ့ခြေရာမတိုင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာ ဆရာတို့က ပုလိပ်ပဲဗျာ
ဆရာတို့က ဆရာပါခင်ဗျာ ကိုအိမ်လွမ်းသူလည်း တောင်းပန်နေပါပြီခင်ဗျာ
alinsett says: ကိုရာမည
ဘာလို့ဆိုတော့ စတာက ကိုရွှေညာသားရဲ့ ပိုစ့်ထဲက ကဗျာတွေကို
ဖြေရှင်းနည်းလားး ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျ ။
ဖြစ်သင့်လား ။ ထားတော့။ ကိုရာမညက ကိုရာမည ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်က ကိုအိမ်လွမ်းသူရဲ့ comment ဟာ စည်းကမ်းနဲ့ ငြိနေတယ်လို့ ပြောရင်
ခင်ဗျား သတ်မှတ်ပေးလိုက်လို့ ဖြစ်သွားတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှလည်း ထူး မသွားဘူး။ ပြီးတော့ . . .
ဒီတော့ ကိုယ့်ဘာသာ တောင်းပန်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာပဲ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပေတော့ဗျာ။ ——–
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကိုကြောင် — ကိုရွှေ့ညာသားမှာ အပျိုပေါက်သမီးချောချောလေး နှစ်ယောက်တောင်ရှိသတဲ့။
Iris says: ဦး​ကြောင်​က​တော့ ​ဂေဇက်​မှာ ​ကြောင်​ဂျီး လုပ်​တယ်​​ပေါ့။ ​ငါးမန်း၈ျီးက​တော့ သူ့ဘာသာ​နေတာ. ​ကြောင်​၈ျီးက​တော့…အားလုံးကိုလိုက်​ကုတ်​​နေတာပဲ။ :-D
Myo Thant says: ကိုရွှေညာသားရေ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အော် ……………………ဘာလို ထွက်ရမှာလဲဗျ
မြစာကလေး (23122011) says: ဒီမယ် အစ်ကိုကြီး ရဲ့
မယုံရင် ပြန် စစ်ကြည့်။ ကြည့်ရတာ အခု လဲ နှစ် တစ်ရာ လုပ်ပြန်ပြီ ထင်ရဲ့။ အခါ မခံ လိုက်စမ်းပါနဲ့ ။
ဦးကြောင်ကြီး says: လျှာမည ဆိုတဲ့ကောင်ကို လဗြင်ထွဋ်..
padonmar says: .စာပိနေလို့ ရွာရှောင်လုပ်နေတာ ဖွဘုတ်ထဲမှာ .ဆူညံဆူညံကြားလို့ အဖွားကြီးဒုံ .ပြုတ်ကျနေတဲ့မျက်မှန်ကောက်တပ်ကြည့်လိုက်မိတယ်။
တိမ်မည်း says: Democracy မှာ အာဏာပိုင်ရှိတယ် အတိုက်အခံရှိတယ်…6နဲ့9 လို့ ပေါ့ဗျာ….
ဦးကြောင်ကြီး says: ဟေ့..ဟေ့ ပြန်မလာနဲ့နော်.. ပျော့ပီးစလစ် နံပြားညှစ်…
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဒီရွာထဲမှာ ရန်ဖြစ်တိုင်းမကျေနပ်တိုင်းသာထွက်ရမယ်ဆိုရင် လူတောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ကိုရွှေညာသားရယ်။ ကျွန်မတို့လဲ မကျေနပ်တာတွေ ရန်ဖြစ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဖူးတာပဲ။ ရှိလဲရှိနေဆဲ နောင်လဲရှိနေအုံးမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူလို့ ဆိုတာလေးနဲ့တော့ မထွက်စေချင်ပါဘူး။ အမြင်ဆိုတာ ဒီတချိန်တူတတ်ပေမဲ့ ခဏနေကွဲချင်ကွဲတတ်တာပဲလေ။ အဲ့တော့လဲ တူတာလေးယူ မတူတာလေးဖယ်ပြီး ဆက်ချီတက်ကြရအောင်လား
alinsett says: အလဂါးး